Thenga Futhi Uthengise Imali Eyidijithali Ngokushesha | Paxful
Zuza Imali Yedijithali Nge-Paxful
Thenga futhi uthengise izimali zedijithali ngendlela elula. Thola i-akhawunti yakho ye-Paxful, qala ukwamukela inkokhelo futhi uzuze imali ngokuhweba.
Izindlela eziphezu kwezingu-350 zokuthenga nokuthengisa i-Bitcoin
Khetha indlela yokukhokha oyithandayo futhi uhwebe ngokuqondile nabanye abantu abafana nawe!
Thengisa I-Bitcoin Thenga I-Bitcoin
Thola inkokhelo ye-Bitcoin yakho engena ngokuqondile ku-akhawunti yakho yasebhange noma kuphi emhlabeni.
Shintsha Uthole Imali Engokoqobo
Khokhelwa imali emnyango wakwakho noma endaweni ongayilanda kuyo eseduzane.
Izikhwama Zemali Eziku-Inthanethi
Thumela ezikhwameni zemali eyidijithali ezingaphezu kwezingu-140 emhlabeni jikelele.
Amakhadi Esipho Esephulelo
Thengisa i-Bitcoin yakho ukuze uthole izephulelo ezinkulu emakhadini esipho athandwayo avela kwa-iTunes, Amazon nakwezinye izindawo eziningi.
Hweba nge-Bitcoin yakho ukuze uthole noma iyiphi imali eyidijithali kulezi ezikhona ezithandwayo.
Sebenzisa i-Bitcoin yakho ukuze uthenge noma yini ekhona emhlabeni.
I-Paxful ikwenza kuphephe futhi kube lula kuwe ukuhweba nge-Bitcoin. Thola okunikezwayo okuhle kakhulu ngezansi bese uthenge i-Bitcoin usebenzisa i-Bank Transfers ngezinyathelo ezingu-5 ezilula.
Ingabe awufuni ukuphuma endlini? Ungasebenzisa ama-apps okukhokha amaningana athandwayo.
Ingabe unekhadi lesipho ongalidingi? Hweba ngalo lapha ngokushesha uthole i-Bitcoin.
Ukukhokha Ngemali Engokoqobo
Thenga i-Bitcoin ukhokhe ngemali. Kulula. Akudingeki akhawunti yasebhange.
I-Paxful ikwenza kuphephe futhi kube lula kuwe ukuhweba nge-Bitcoin. Thola okunikezwayo okuhle kakhulu ngezansi bese uthenge i-Bitcoin usebenzisa ama-Debit/Credit Cards ngezinyathelo ezingu-5 ezilula.
Izinhlobo Zemali yedijithali
Hweba izimali zakho eziyidijithali noma amathokheni ukuze uthole i-Bitcoin efakwa ngokushesha esikhwameni sakho semali eyidijithali.
Hweba noma yini okungeyakho, kusukela ezimotweni negolide kuya ekudleni nemishini yasendlini, ukuze uthole i-Bitcoin.
Bheka Konke Okuthengiswayo
I-Paxful ithandwa kakhulu emkhakheni wezimali eziyidijithali futhi kubhalwe ngayo kakhulu komagazini abaningi abadumile. Omunye wemisebenzi yethu ukwakha izikole ezingu-100 e-Afrika. Bukela ividiyo yethu ngezansi ukuze ufunde okwengeziwe ngohlelo lwethu lwe #buitwithbitcoin.
Yiba umdayisi we-Bitcoin ku-Paxful
Yiba umdayisi ku-Paxful futhi usize izigidi zabantu emhlabeni ngenkululeko yezezimali. Hlinzeka ngezindlela zokukhokha ezihlukahlukene ezithandwa abathengi, susa ophakathi umuntu komthengi nomthengisi, futhi sizokusiza ngazo zonke izinsiza kanye neziqondiso ezidingekayo ukuze uphumelele.
Izigidi zabantu kakade sezisebenzise i-Paxful ngokuphumelelayo futhi kuningi okuhle abangakusho ngathi. Yizwa lokho abasebenzisi bethu abakucabangayo nge-Pexful, bezisholo ngamazwi abo.
Khulisa inkululeko yakho yezezimali ibe sezingeni eliphezulu nge-Paxful.
Thenga i-Bitcoin ku-inthanethi
Hweba nge-escrow ephephile
I-Bitcoin yakho igcinwe ku-escrow yethu ephephile kuze kube yilapho ukuhweba sekuphothulwe ngokuphumelelayo.
Yakha idumela lakho
Isistimu yethu yokuphawula komsebenzisi ikuvumela ukuba ubone ozakweni abathembekile nabangomakadebona ongahwebelana nabo.
Thola isikhwama semali samahhala
Thola iholo elengeziwe
Qala ukuhweba ku-Paxful
Bhalisa namuhla futhi uthole isikhwama semali samahhala. Ngokushesha ungaqala ukuthenga nokuthengisa i-Bitcoin ngaphandle kwezinkinga.